downloads 12 614
Helikopta mara mma mara mma nke ukwuu dị ka onye mgbapụta nke fortali maka FS2004, n'ime ime ya na akwa ụda 3D zuru oke. Gauges yiri ka ọ na-arụ ọrụ, ịdịmma ya niile add-on dị mma nke ukwuu!
N'oge na-adịghị: The dolphin a vasatail na-ajụ helikopta e mere site French ụlọ ọrụ Sud Aviation nọchiri ndị Alouette III. Ọkọri ke National Industrial Aerospace, onye helikopta nkewa aghọ n'ime 1992 na French ogwe-aka nke Eurocopter, kemgbe isiokwu nke obodo na agha nmepe. The dolphin nwekwara nyere nwa ndị ezinụlọ ọgụ ugbo elu na Eurocopter akukonta ka a ọgbọ ọhụrụ nke na ndi nkiti ugbo elu ẹkedọhọde Eurocopter EC-155. (Source Wikipedia)
Onye edemede: I-FOX Franco